ယောက်ျားလေးတွေအကြားချင်ဆုံးချီးမွမ်းစကားတွေက – Trend.com.mm
Posted on April 15, 2018 April 9, 2018 by San Wadi Hnin
မိန်းကလေးတွေမှ သူတို့ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုရင် ကြွေကျကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ယောက်ျားလေးတွေလည်းလူထဲကလူပဲဖြစ်တဲ့အတွက် သူတုိ့ကို ချီးမွမ်းတဲ့စကားတွေက သူတို့အသည်းနှလုံးကိုကိုင်လှုပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်ပေါ့။ သင့်ရဲ့ချီးမွမ်းစကားဟာ အမှန်တကယ်ရင်ထဲကလာတာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ နောက်ပြီး ခဏခဏပြောနေတာလည်းမဖြစ်ရပါဘူး။ရိုးသွားပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ခုက လူတိုင်းကသတိထားမိတဲ့အရာမျိုးလည်းမဖြစ်သင့်ပြန်ပါဘူး။ဥပမာအားဖြင့် ရုပ်အရမ်းချောတဲ့လူက အရမ်းချောတာပဲဆိုတဲ့ချီးမွမ်းစကားကို သူ့ဘဝမှာခဏခဏကြားနေရမှာပါ။ဒီတော့ တုံ့ပြန်မှုကလည်းသိပ်ပြီးထူးဆန်းမှာမဟုတ်သလုိုသူ့ရင်ထဲကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်စွမ်းကလည်း သူလိုကိုယ်လိုခပ်ပါးပါးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့ သူ့ရင်ထဲကို နက်ရှိုင်းစွာထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်မယ့်ချီးမွမ်းစကားမျိုးမှာ ပါဝင်ရမယ့်အရည်အချင်းတွေကတော့ ရင်ထဲကလာတာဖြစ်ဖို့၊သူ့မှာအစစ်အမှန်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး လူတွေသိပ်သတိမထားမိကြသေးတဲ့အရည်အချင်းတစ်ခုခုကိုအထူးပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ယောက်က်ျားလေးအများစုဘယ်လိုမှတောင့်မခံနိုင်ပဲကြွေကျတတ်ကြတဲ့ချီးမွမ်းစကားအနည်းငယ်ကိုိဖော်ပြပေးရမယ်ဆိုရင်….
ဒါကလည်း ဟာသပြောတတ်တဲ့သူမျိုးမှဖြစ်မှာပေါ့နော်။သူဟာသပြောတဲ့အခါ ရယ်မောပေးပါ။ သိသိသာသာတမင်လုပ်ရယ်နေသလိုမျိုးကြီးဖြစ်မနေပါစေနဲ့။ ပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲရယ်မောပြီး ရှင်ကဟာသညဏ်ရှိလိုက်တာဆိုတာမျိုးပြောပေးပါ။ ယောက်ျားလေးအများစုဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပျင်းဖို့ကောင်းတဲ့လူမျိုးလို့တိတ်တဆိတ်ထင်နေတတ်ကြတာမို့ ဒီစကားက သူတို့ကိုိစိတ်သက်သာရာရစေမှာသေချာပါတယ်။
မိန်းကလေးဖြစ်နေပြီး ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကို ရှင်သိပ်ချောတာပဲဆိုတာမျိုးက ပြောရတာတစ်မျိုးကြီးတော့ဖြစ်နေမှာသေချာပါတယ်။ဒါကြောင့် ခြုံငုံပြောတဲ့နည်းတွေကိုစွန့််လွှတ်လိုက်ပါ။ မျက်တောင်ရှည်တဲ့ယောက်ျားလေးကိုဆို ရှင့်မျက်တောင်တွေကိုအားကျလိုက်တာဆိုတာမျိုး၊ ကြွက်သားတွေကြီးမားတဲ့သူကိုဆိုရင် ရှင်ဒီလိုကြွက်သားတွေရဖို့သိပ်ကြိုးစားခဲ့ရမှာပဲနော် ဆိုတာမျိုး မျက်လုံးလေးဝိုင်းပြီးပြောတာက ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ သူ့ကိုယ်သူစိတ်ကျေနပ်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးတဲ့အပြင် သင့်ကိုပါ နှစ်သက်စိတ်ဝင်စေမှာသေချာပါတယ်။
ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ မသိစိတ်ထဲမှာကိုက သူတုိ့ဟာ အရာရာကိုဦးဆောင်သူဆိုတဲ့ မဟာပုရိသဝါဒက ကိန်းအောင်းနေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် အနည်းငယ်အရေးကြီိးတဲ့ ပြဿနာမျိုးမှာ ရှင်ရောဘယ်လိုထင်သလဲဟင် ဆိုပြီး သူတို့ကိုအကူအညီတောင်းခံခြင်းက သူ့ရဲ့နဂိုစိတ်အခံကိုနှိုးဆွပေးလိုက်သလိုဖြစ်စေပြီး သူသာသင့်ကိုချစ်နေတဲ့သူဆိုရင် အစစအရာရာဦးဆောင်ဖြေရှင်းပေးသွားတဲ့အထိ အဲ့ဒီ့စကားတစ်ခွန်းကအစွမ်းထက်နိုင်ပါတယ်။
စိတ်ပညာလေ့လာချက်တွေအရ ယောက်ျားလေးအများစုက သူတို့နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကြားမှာ တစ်ခုခုတော့မှားနေတယ်လို့အမြဲလိုလိုခံစားနေရလေ့ရှိပါတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးကိုချီးမွမ်းပေးခြင်းက သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုပိုတိုးလာစေပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းတုံ့ပြန်မှုကောင်းတွေပေးစေပါတယ်။
တကယ်လို့ သူကသင့်ကိုကားတစ်စီးစီးရဲ့လမ်းပေါ်ကနေဖယ်ရှားပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်၊တကယ်လို့သင့်ကိုသူက မကောင်းတဲ့လူတွေရန်ကနေ တစ်နည်းနည်းနဲ့ကာကွယ်ပေးခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရင် ဒီလိုစကားမျိုးက သူ့နှလုံးသားကိုအပိုင်သိမ်းနိုင်မယ့်စကားမျိုးပါ။အဲ့ဒါကတော့ ရှင့်နားမှာနေရတာ သိပ်ပြီးလုံခြုံတာပဲ ဆိုတဲ့စကားမျိုးပေါ့။ သူဟာ သင့်ကိုချစ်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ရှေ့လျှောက် သင့်အတွက်ဆို အရိုးကြေကြေအရေခမ်းခမ်းဆိုတဲ့စိတ်အနေအထားမျိုးအထိရောက်အောင်ပြောင်းလဲပစ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့််မှတ်ထားပါ။ ကိုယ်ကတစ်ခုခုလိုချင်လို့ ချီးမွမ်းစကားတွေကိုတံတားတစ်စင်းလိုအသုံးချပြီး သူ့ဆီက လိုချင်တာရယူဖို့ဆိုရင်တော့ ဒီလိုယုတ်ညံ့တဲ့အလုပ်မျိုးမလုပ်တာကောင်းပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေဟာ ငတုံးတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ သူအကြားချင်ဆုံးချီးမွမ်းစကားလေးတွေကို အခါအားလျော်စွာပြောပေးခြင်းအားဖြင့် သူ့ကိုစိတ်ဓာတ်တက်ကြွအောင်၊စိတ်ခွန်အားပြည့်အောင်လုပ်ပေးတာကပဲဖြစ်သင့်တာပါ။
မိနွးကလေးတှမှေ သူတို့ကိုခှီးမှမွးပှောဆိုရငွ ကှကကှတောမဟုတပွါဘူး။ယောကွှားလေးတှလညွေးလူထဲကလူပဲဖှစတွဲ့အတှကွ သူတို့ကို ခှီးမှမွးတဲ့စကားတှကေ သူတို့အသညွးနှလုံးကိုကိုငလွှုပနွိုငပွါတယွ။ တစခွုတော့ရှိတယွပွေါ့။ သငွ့ရဲ့ခှီးမှမွးစကားဟာ အမှနွတွကယရွငထွဲကလာတာဖှစွဖွို့လိုပါတယွ။ နောကပွှီး ခဏခဏပှောနတောလညွးမဖှစရွပါဘူး။ရိုးသှားပါလိမွ့မယွ။ နောကတွစခွုက လူတိုငွးကသတိထားမိတဲ့အရာမှိုးလညွးမဖှစသွငွ့ပှနပွါဘူး။ဥပမာအားဖှငွ့ ရုပအွရမွးခှောတဲ့လူက အရမွးခှောတာပဲဆိုတဲ့ခှီးမှမွးစကားကို သူ့ဘဝမှာခဏခဏကှားနရမှောပါ။ဒီတော့ တုံ့ပှနမွှုကလညွးသိပပွှီးထူးဆနွးမှာမဟုတသွလုိုသူ့ရငွထွဲကိုထိုးဖောကဝွငရွောကနွိုငစွှမွးကလညွး သူလိုကိုယလွိုခပပွါးပါးပဲဖှစနွပေါလိမွ့မယွ။ဒီတော့ သူ့ရငထွဲကို နကရွှိုငွးစှာထိုးဖောကဝွငရွောကနွိုငမွယွ့ခှီးမှမွးစကားမှိုးမှာ ပါဝငွရွမယွ့အရညအွခငွှးတှကတေော့ ရငထွဲကလာတာဖှစဖွို့၊သူ့မှာအစစအွမှနပွိုငဆွိုငထွားပှီး လူတှသေိပသွတိမထားမိကှသေးတဲ့အရညအွခငွှးတစခွုခုကိုအထူးပှုဖို့လိုအပပွါတယွ။ ယောကကွှားလေးအမှားစုဘယလွိုမှတောငွ့မခံနိုငပွဲကှကတှတေကွှတဲ့ခှီးမှမွးစကားအနညွးငယကွိုဖောပွှပေးရမယဆွိုရငွ….
ဒါကလညွး ဟာသပှောတတတွဲ့သူမှိုးမှဖှစမွှာပေါ့နွော။သူဟာသပှောတဲ့အခါ ရယမွောပေးပါ။ သိသိသာသာတမငလွုပရွယနွသလေိုမှိုးကှီးဖှစမွနပေါစနေဲ့။ ပုံမှနွအွတိုငွးလေးပဲရယမွောပှီး ရှငကွဟာသညဏရွှိလိုကွတွာဆိုတာမှိုးပှောပေးပါ။ ယောကွှားလေးအမှားစုဟာ ကိုယွ့ကိုယွကွိုယပွငွှးဖို့ကောငွးတဲ့လူမှိုးလို့တိတတွဆိတထွငနွတတကွှေတာမို့ ဒီစကားက သူတို့ကိုစိတသွကသွာရာရစမှောသခှောပါတယွ။
မိနွးကလေးဖှစနွပှေီး ယောကွှားလေးတစယွောကကွို ရှငသွိပခွှောတာပဲဆိုတာမှိုးက ပှောရတာတစမွှိုးကှီးတော့ဖှစနွမှောသခှောပါတယွ။ဒါကှောငွ့ ခှုံငုံပှောတဲ့နညွးတှကေိုစှနွ့လွှတလွိုကပွါ။ မကွှတွောငွရွှညတွဲ့ယောကွှားလေးကိုဆို ရှငွ့မကှတွောငတွှကေိုအားကလှိုကတွာဆိုတာမှိုး၊ ကှကသွားတှကှေီးမားတဲ့သူကိုဆိုရငွ ရှငဒွီလိုကှကသွားတှရဖေို့သိပကွှိုးစားခဲ့ရမှာပဲနွော ဆိုတာမှိုး မကှလွုံးလေးဝိုငွးပှီးပှောတာက ယောကွှားတစယွောကွရွဲ့ သူ့ကိုယွသွူစိတကွှနပွမွှေုကိုမှငွ့တငပွေးတဲ့အပှငွ သငွ့ကိုပါ နှစသွကစွိတဝွငွစွမှောသခှောပါတယွ။
ယောကွှားလေးတှရေဲ့ မသိစိတထွဲမှာကိုက သူတို့ဟာ အရာရာကိုဦးဆောငွသွူဆိုတဲ့ မဟာပုရိသဝါဒက ကိနွးအောငွးနတတပွေါတယွ။ဒါကှောငွ့ အနညွးငယအွရေးကှီိးတဲ့ ပှဿနာမှိုးမှာ ရှငရွောဘယလွိုထငသွလဲဟငွ ဆိုပှီး သူတို့ကိုအကူအညီတောငွးခံခှငွးက သူ့ရဲ့နဂိုစိတအွခံကိုနှိုးဆှပေးလိုကသွလိုဖှစစွပှေီး သူသာသငွ့ကိုခစှနွတေဲ့သူဆိုရငွ အစစအရာရာဦးဆောငဖွှရှငွေးပေးသှားတဲ့အထိ အဲ့ဒီ့စကားတစခွှနွးကအစှမွးထကနွိုငပွါတယွ။
စိတပွညာလလေ့ာခကှတွှအရေ ယောကွှားလေးအမှားစုက သူတို့နဲ့ ပတွဝွနွးကငှနွဲ့ကှားမှာ တစခွုခုတော့မှားနတယလွေို့အမှဲလိုလိုခံစားနရလရှေိ့ပါတယတွဲ့။ ဒါကှောငွ့ သူ့ရဲ့လူမှုဆကွဆွံရေးကိုခှီးမှမွးပေးခှငွးက သူ့ကိုယွသွူယုံကှညမွှုပိုတိုးလာစပှေီး ပတဝွနွးကငှကွိုလညွးတုံ့ပှနမွှုကောငွးတှပေေးစပေါတယွ။
တကယွလွို့ သူကသငွ့ကိုကားတစစွီးစီးရဲ့လမွးပေါကွနဖယရွှေားပေးခဲ့တယဆွိုရငွ၊တကယလွို့သငွ့ကိုသူက မကောငွးတဲ့လူတှရနွကွေနေ တစနွညွးနညွးနဲ့ကာကှယပွေးခဲ့ဖူးတယဆွိုရငွ ဒီလိုစကားမှိုးက သူ့နှလုံးသားကိုအပိုငသွိမွးနိုငမွယွ့စကားမှိုးပါ။အဲ့ဒါကတော့ ရှငွ့နားမှာနရတော သိပပွှီးလုံခှုံတာပဲ ဆိုတဲ့စကားမှိုးပေါ့။ သူဟာ သငွ့ကိုခစှတွဲ့ယောကွှားတစယွောကဖွှစမွယဆွိုရငွ ရှလှေှ့ောကွ သငွ့အတှကဆွို အရိုးကှကှအရေခေမွေးခမွးဆိုတဲ့စိတအွနအထေားမှိုးအထိရောကအွောငပွှောငွးလဲပစလွိုကနွိုငပွါတယွ။
ဒါပမယွမွေှ့တွထွားပါ။ ကိုယကွတစခွုခုလိုခငှလွို့ ခှီးမှမွးစကားတှကေိုတံတားတစစွငွးလိုအသုံးခပှီး သူ့ဆီက လိုခငှတွာရယူဖို့ဆိုရငတွော့ ဒီလိုယုတညွံ့တဲ့အလုပမွှိုးမလုပတွာကောငွးပါတယွ။ယောကွှားလေးတှဟော ငတုံးတှမဟေုတကွှပါဘူး။ သူအကှားခငှဆွုံးခှီးမှမွးစကားလေးတှကေို အခါအားလှောစွှာပှောပေးခှငွးအားဖှငွ့ သူ့ကိုစိတဓွာတတွကကွှအောငွ၊စိတခွှနအွားပှညွ့အောငလွုပွပွေးတာကပဲဖှစသွငွ့တာပါ။
၇နှစ်ကြာပြီးမှ ပြန်လည်တွေ့ဆုံဖို့ အခွင့်အရေးရလာတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်